महासंघको अध्यक्षमा नेपालगञ्जका भवानी राणा र केन्द्रिय सदस्यमा कृष्ण प्र. श्रेष्ठ निर्वाचित – HamroSamrachana
महासंघको अध्यक्षमा नेपालगञ्जका भवानी राणा र केन्द्रिय सदस्यमा कृष्ण प्र. श्रेष्ठ निर्वाचित
हाम्रो संरचना आइतवार, कार्तिक ७, २०७८ 601 Views
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षमा भवानी राणा र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेखर गोल्छा चयन भएका छन् । त्यसैगरी नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण प्रशाद श्रेष्ट केन्द्रिय सदस्यमा निवाचित हुनु भएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार राणा र गोल्छा नेतृत्वको कार्यसमितिले बुधबारबाट जिम्मेवारि सम्हाल्दै छ । महासंघमा राणा पहिलो महिला अध्यक्ष हुन् । राणाले सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रतिक्रिया दिइन् । ‘अब चुनाव सकियो । निजी क्षेत्रको विकासको लागि एक ढिक्का भएर ‘सबैलाई मिलाएर अघि बढ्छु ।’
निर्वाचन गर्न गठीत समितिका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गोल्छाले जिल्ला/नगरतर्फबाट ६१, वस्तुगतबाट ४७ र एसोसिएटबाट ५ सय ४ मत ल्याइ बिजयी भएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी किशोर प्रधानले भने वस्तुगतबाट ५१, जिल्ला नगरतर्फबाट ४२ र एसोसिएटबाट १ सय २३ मत प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचन समितिका सदस्य लिलामणि पौडेलका अनुसार जिल्ला/नगरबाट १ सय ४, वस्तुगतबाट ९९ र एसोसिएटबाट ६ सय ३५ मत खसेको थियो ।
जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा प्रमोद श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । १ सय ४ मतमध्ये उनले ५५ मत प्राप्त गरे । उनका प्रतिद्वन्दी दिनेश श्रेष्ठले ४८ मत ल्याएको समितिका सदस्य पौडेलले बताए । त्यस्तै वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा अमेशलाल श्रेष्ठ विजयी भएका छन् ।
९९ मत मध्ये उनले ४९ मत ल्याइ विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी शंकर पाण्डे र अनुपबहादुर मल्लले ११ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिका सदस्य पौडेलले बताए । एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्ष पदमा चन्द्र ढकालको मात्रै उमेद्वारी परेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
यो आधारमा जिल्ला/नगरतर्फका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बाहेक पदाधिकारीमा गोल्छा प्यानल विजयी भएको छ । अधिकांश सदस्य पदहरुमा समेत गोल्छा प्यानलतर्फका विजयी भएका छन् । अध्यक्ष राणाले समेत गोल्छा प्यानलको समूहलाई समर्थन गरेकी थिइन । सदस्य पदको विवरण भने निर्वाचन समितिले अझै सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।